407 Zim repatriates on way to Beitbridge | News24
Harare - A first contingent of more than 400 Zimbabweans fleeing xenophobic violence in Durban is expected to reach the Beitbridge border post on Monday, the official Herald newspaper reported.
Buses carrying 407 Zimbabweans - described as "enthusiastic to go home" - only left Durban late on Sunday, the report said.
Zimbabwe's ambassador to South Africa, Isaac Moyo, said another 400 Zimbabweans were on Monday waiting to leave Durban from the Phoenix Holding Centre.
Moyo told the paper: "These will be repatriated to Zimbabwe by the end of today or on Tuesday morning. We have since addressed them and told them what we expect from them so that we can assist them."
All returning migrants are going through "basic" checks to confirm that they are Zimbabwean.
At least two Zimbabweans are believed to be among those killed in the wave of xenophobic attacks that broke out more than a week ago. Zimbabwe President Robert Mugabe at the weekend expressed his "shock and disgust" at the attacks and said they must never happen again.
Zimbabwe said it had provided the buses for its nationals to travel home in. Officials from Zimbabwe's Civil Protection Unit and the International Organisation for Migration (IOM) are waiting to meet the Zimbabweans at Beitbridge and help them return home.
Bishow Parajuli, the resident UN co-ordinator for Zimbabwe, said in a tweet at the weekend: "@UNZimbabwe joining govt 2 support affected Zimbabweans 2 bring home."